နှင်းဆီမင်းသားတွေရဲ့ ဖျော်ဖြေမှုတွေကို Private Closed Group ထဲမှာ သီးသန့်ဆုံတွေ့အားပေးလို့ရမယ့် အစီအစဉ်တစ်ခုကို ပြောပြလာတဲ့ နေတိုး – Askstyle
နှင်းဆီမင်းသားတွေရဲ့ ဖျော်ဖြေမှုတွေကို Private Closed Group ထဲမှာ သီးသန့်ဆုံတွေ့အားပေးလို့ရမယ့် အစီအစဉ်တစ်ခုကို ပြောပြလာတဲ့ နေတိုး
ဒါရိုက္တာ ေမာင္မ်ိဳးမင္း (ရင္တြင္းျဖစ္) ဦးစီးျပီး ေနတိုး၊ မင္းေမာ္ကြန္း၊ ေက်ာ္ေက်ာ္ဗို၊ ရဲေလး၊ ထြန္းထြန္း၊ မိုးယုစံ၊ ေမကဗ်ာ၊ မိုးျပည့္ျပည့္ေမာင္တို့ ပါဝင္တဲ့ နွင္းဆီအဖြဲ့ၾကီးကေတာ့ နွစ္စဥ္နွစ္တိုင္းလိုလို အခက္အခဲျဖစ္ေနတဲ့ ျမန္မာျပည္အနွံ့ကေဒသေတြကို ကူညီဖို့ ရံပံုေငြေဖ်ာ္ေျဖပြဲေတြ က်င္းပေလ့ရိွတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန့မွာေတာ့ ေနတိုးက နွင္းဆီမင္းသားေတြရဲ့ ေဖ်ာ္ေျဖမႈေတြကို Private Closed Group ထဲမွာ သီးသန့္ဆံုေတြ့အားေပးလို့ရမယ့္ အစီအစဥ္တစ္ခုကို ေျပာျပလာခဲ့ပါတယ္။
December ​လရဲ႕ ညတစ္ညမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ႏွင္းဆီပရိတ္သတ္ေတြအတြက္ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ အစီအစဥ္ေလးတခု စီစဥ္ထားပါတယ္။ ခ်စ္ရတဲ့ပရိတ္သတ္ေတြလည္း အားလုံးေပ်ာ္ရမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏွင္းဆီေတြလည္း ေပ်ာ္ေနရမယ္အစီအစဥ္ေလးပါ။ အဲ့အစီအစဥ္ေလးက ဘာလည္းဆိုေတာ့ ႏွင္းဆီပရိတ္သတ္ေတြ အတြက္ သီးသီးသန႔္သန႔္ ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ဆုံေတြ႕အားေပးလို႔ရမယ့္ Private Closed Group ေလးတခု ကို ဖန္တီးထားပါတယ္. ”
“ႏွင္းဆီကိုခ်စ္ေသာ ပရိတ္သတ္မ်ား အေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဖန္တီးထားတဲ့ Private Closed Group ေလးထဲကို Group Member အျဖစ္ဝင္ေရာက္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ မႈမ်ားကို အားေပးၾကည့္ရႈ ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွင္းဆီေတြရဲ႕ Private Closed group ထဲကို ပရိသတ္ေတြ က Group Members အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈ အားေပးဖို႔အတြက္ Facebook account တခုကို က်ပ္ ၅၀၀၀ သာေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ကဲ …… ကြၽန္ေတာ့္တို႔ ႏွင္းဆီေတြ ရဲ႕ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈေတြက ဘာေတြျဖစ္မလဲဆိုတာကို သိခ်င္ရင္ေတာ့ ဒီ ႏွင္းဆီေတြရဲ႕ Private Closed Group ထဲကို လာ ေရာက္ Join ထားဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ Private Close group နာမည္ နဲ႔ ျပဳလုပ္မယ့္ရက္နဲ႔ အခ်ိန္ကိုလည္း ထပ္မံ ေၾကျငာသြားပါမယ္ဗ်ာ။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏွင္းဆီပရိတ္သတ္ေတြ အရမ္းေပ်ာ္ေနေစမယ္ဗ်ာ။ ကဲ ဘယ္လိုလည္း မိတ္ေဆြတို႔…..??Stay Tuned……” ဆိုျပီး ေျပာလာခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ေနတိုး၊ မင္းေမာ္ကြန္း၊ ေက်ာ္ေက်ာ္ဗုိလ္၊ ထြန္းထြန္းနဲ့ ရဲေလးတို့ကို သီးသီးသန့္သန့္ေတြ့ဆံုနိုင္မယ့္ Private Closed Group အစီအစဥ္ေလးကေတာ့ ျမန္မာေငြက်ပ္ (၅၀၀၀) က်ပ္တည္းသာ က်သင့္မယ္လို့ သိရပါတယ္။ ဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့ Cele Connections ပရိသတ္ႀကီးအားလုံးလည္း သာယာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ ေန႔ေလးတစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။
ဒါရိုက်တာ မောင်မျိုးမင်း (ရင်တွင်းဖြစ်) ဦးစီးပြီး နေတိုး၊ မင်းမော်ကွန်း၊ ကျော်ကျော်ဗို၊ ရဲလေး၊ ထွန်းထွန်း၊ မိုးယုစံ၊ မေကဗျာ၊ မိုးပြည့်ပြည့်မောင်တို့ ပါဝင်တဲ့ နှင်းဆီအဖွဲ့ကြီးကတော့ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလိုလို အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာပြည်အနှံ့ကဒေသတွေကို ကူညီဖို့ ရံပုံငွေဖျော်ဖြေပွဲတွေ ကျင်းပလေ့ရှိတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ နေတိုးက နှင်းဆီမင်းသားတွေရဲ့ ဖျော်ဖြေမှုတွေကို Private Closed Group ထဲမှာ သီးသန့်ဆုံတွေ့အားပေးလို့ရမယ့် အစီအစဉ်တစ်ခုကို ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။
December လရဲ့ ညတစ်ညမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နှင်းဆီပရိတ်သတ်တွေအတွက်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အစီအစဉ်လေးတခု စီစဉ်ထားပါတယ်။ ချစ်ရတဲ့ပရိတ်သတ်တွေလည်း အားလုံးပျော်ရမယ်။ ကျွန်တော်တို့နှင်းဆီတွေလည်း ပျော်နေရမယ်အစီအစဉ်လေးပါ။ အဲ့အစီအစဉ်လေးက ဘာလည်းဆိုတော့ နှင်းဆီပရိတ်သတ်တွေ အတွက် သီးသီးသန့်သန့် နွေးနွေးထွေးထွေး ဆုံတွေ့အားပေးလို့ရမယ့် Private Closed Group လေးတခု ကို ဖန်တီးထားပါတယ်. ”
“နှင်းဆီကိုချစ်သော ပရိတ်သတ်များ အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဖန်တီးထားတဲ့ Private Closed Group လေးထဲကို Group Member အဖြစ်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖျော်ဖြေတင်ဆက် မှုများကို အားပေးကြည့်ရှု နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှင်းဆီတွေရဲ့ Private Closed group ထဲကို ပရိသတ်တွေ က Group Members အဖြစ် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှု အားပေးဖို့အတွက် Facebook account တခုကို ကျပ် ၅၀၀၀ သာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ …… ကျွန်တော့်တို့ နှင်းဆီတွေ ရဲ့ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကို သိချင်ရင်တော့ ဒီ နှင်းဆီတွေရဲ့ Private Closed Group ထဲကို လာ ရောက် Join ထားဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ Private Close group နာမည် နဲ့ ပြုလုပ်မယ့်ရက်နဲ့ အချိန်ကိုလည်း ထပ်မံ ကြေငြာသွားပါမယ်ဗျာ။ သေချာတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ နှင်းဆီပရိတ်သတ်တွေ အရမ်းပျော်နေစေမယ်ဗျာ။ ကဲ ဘယ်လိုလည်း မိတ်ဆွေတို့…..??Stay Tuned……” ဆိုပြီး ပြောလာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နေတိုး၊ မင်းမော်ကွန်း၊ ကျော်ကျော်ဗိုလ်၊ ထွန်းထွန်းနဲ့ ရဲလေးတို့ကို သီးသီးသန့်သန့်တွေ့ဆုံနိုင်မယ့် Private Closed Group အစီအစဉ်လေးကတော့ မြန်မာငွေကျပ် (၅၀၀၀) ကျပ်တည်းသာ ကျသင့်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။